सामाजिक मिडिया मार्केटिंग सामाजिक हो, मिडिया होइन Martech Zone
बुधबार, मार्च 10, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू उपकरणहरू हुन्। सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू सफ्टवेयर हुन्। त्यहाँ बाहिर अन्य उपकरणहरू र सफ्टवेयर छन्। कुनाको वरिपरि उत्तम उपकरणहरू छन्।
ट्विटरले केही फरक पार्दैन। फेसबुकले केही फरक पार्दैन। लिंक्डइनले केही फरक पार्दैन। ब्लगले फरक पार्दैन। ती सबैले हामीलाई वास्तवमै चाहिने कुराको अलि नजिक जान मद्दत गर्दछ।
के हामी वास्तवमै चाहन्छौं त्यो हो सत्य.
हामी वास्तवमै के चाहन्छौं विश्वास गर्नुहोस्.
हामी वास्तवमै के चाहन्छौं बुझ्न.
हामी वास्तवमै के चाहन्छौं मित्रता.
हामी वास्तवमै के चाहन्छौं मदत.
यस महिना मेरो एक राम्रो टेक्नोलोजीमा मित्र हो। उहाँ आफ्नो सोशल मिडिया कम्पनीलाई इण्डियानाबाट क्यालिफोर्निया सार्दै हुनुहुन्छ। ऊ उपत्यकाको मुटुमा इम्बेड हुन गइरहेको छ केहि अन्य तीक्ष्ण दिमागहरूसँग जुन उनीहरूको सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरू विस्फोटक रूपमा बढेका छन्। (हो, म एक सानो ईर्ष्यालु छु)।
उनको टोलीले बनाएको अनुप्रयोग सरल छ (त्यसैले ट्वीटर हो!) तर यो कुन व्यक्तिको हृदयसम्म पुग्छ वास्तवमै चाहन्छु। तिनीहरूले यसलाई सजिलो बनाउँदछन्। प्लेटफर्म भनेको सामाजिक अंशमा पुग्नको लागि साधन हो। म अविश्वसनीय प्रतिभा र कल्पनालाई कम महत्त्व दिइरहेको छैन जुन यस्तो सुन्दर अनुप्रयोग सुरू गर्नमा आएको हो, त्यहाँ कुनै श .्का छैन। तर लोकप्रियताको कारण एप्लिकेसन सक्षम गर्दछ। यो एक सामाजिक संलग्नता सक्षम गर्दछ जुन हामीले अहिले सम्म देखेका छैनौं।
म ग्राहकहरु र ग्राहकहरु लाई टेक्नोलोजीको बारेमा शिक्षित गर्दछु ताकि हामी यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सक्दछौं र तिनीहरूको सामाजिक प्रभाव अधिकतम बनाउन सक्छौं। त्यसोभए, जब ग्राहकहरू मलाई सोध्छन्, "म कसरी अधिक प्राप्त गर्न सक्छु [अनुयायीहरू, फ्यानहरू, ग्राहकहरू, बज, रिट्वीटहरू घुसाउनुहोस्], म सँधै अलि टाढा छु। यदि तपाईंको कम्पनी एक सामाजिक कम्पनी होईन भने, यदि तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूको ख्याल राख्नुहुन्न, यदि तपाईं विस्मयकारी सामग्री लेख्नुहुन्न भने, यदि तपाईंसँग उत्कृष्ट उत्पाद छैन भने, यदि तपाईंसँग विशेष व्यक्तिहरू छैनन् भने, यदि तपाईं ' होइन उल्लेखनीय… त्यसो भए ठूलो संख्याले तपाईंलाई कुनै राम्रो गर्न सक्दैन।
म यो भन्दै राख्छु…। सामाजिक मिडिया एक एम्प्लीफायर हो। यदि तपाईंसँग विस्तार गर्ने केही छैन भने, तब संसारमा सब भन्दा ठूलो एम्पलीफायरले मद्दत गर्दैन! तपाईंको लागि ठूला र राम्रा एम्प्लीफायरहरू निर्माण गर्न ठूला र उत्तम सामाजिक मिडिया विज्ञहरूको खोजी गर्न रोक्नुहोस्। यो के हो तिनीहरू एम्पलीफाई गर्दै छन् जसले फरक पार्छ।
यो त्यस्तो व्यक्तिको बराबर हो जसले स्टेडियम भर्नको लागि हामीलाई सोधेर गाउन सक्दैन। हामीले स्टेडियम भरे पछि, त्यसोभए के हुन्छ? यदि तपाईं गाउन सक्नुहुन्न भने, हामीसँग एकल टिकट बेच्ने कुनै व्यापार थिएन! म जस्तो मान्छेहरूले कन्सर्टमा देखाउनको लागि मानिसहरू आकर्षित गर्न सक्छन् ... त्यसो भए कार्यक्रमको हेक लगाउनु तपाईंको काम हो!
त्यसोभए ... मलाई सोध्न छोड्नुहोस् यदि तपाईंसँग अहिले नै छैन भने ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाइँका followers०० अनुयायीहरूले तपाइँसँग व्यापार गरीरहेका छैनन् भने कसरी तपाइँले 500,००० थप गर्दै हुनुहुन्छ तपाइँको नतिजाहरुलाई सुधार गर्ने? यहाँ एक टिप छ ... यसले दस पटक असर पार्नेछ।
दस गुणा शून्य शून्य हो।
केहि दिन ट्विटर यहाँ रहनेछैन, फेसबुक यहाँ रहनेछैन, लिंक्डइन यहाँ रहनेछैन ... र हामी नयाँ च्यानलहरूसँग काम गरिरहेका छौं जुन चीजहरू थोरै सजिलो बनाउन जारी राख्न सक्दछौं। ती नयाँ मिडिया प्लेटफार्महरू अझै तपाईंको रणनीति चुनौतीपूर्ण कोर मुद्दाहरू ठीक गर्न सक्षम हुनेछ, यद्यपि। यसलाई पहिले ठीक गरौं।
टैग: सामाजिक संजालसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
मार्क्स 10, 2010 मा 1: 06 PM
लोकप्रिय वाक्यांश को रूपमा "यदि तपाईं योजना बनाउन असफल, तपाईं विफल गर्न योजना" भन्न। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, तपाईंसँग सोशल मिडिया र व्यवसाय मा सफलता छैन यदि तपाईंसँग आफ्नो प्रयासहरू मुद्रीकरण गर्न राम्रो आकारको योजना छैन भने। मलाई मनपर्‍यो जब तपाईं "सोशल मिडिया एक एम्प्लीफायर हो" भन्नुहुँदा, म पूर्ण रूपमा यससँग सहमत छु!
त्यसोभए मेरो सल्लाह हो, तपाईंको सोशल मिडिया रणनीति बनाउनुहोस्, कडा सम्बन्ध बनाउनुहोस् र तपाईंको रूपान्तरण दर बढाउनुहोस्!